Koorsooyinka - Geospatial - Geofumadas
Kala-Bixinta 3D Koorsadan ayay ardaydu ku baran doonaan inay u isticmaalaan dhammaan aaladaha si ay u qaabeeyaan walxaha 3D, iyada oo loo marayo Blender. Mid ka mid ah barnaamijyada is-dhaafsiga ugu wanaagsan ee bilaashka ah iyo kuwa furan, ee loogu talagalay qaabeynta, habeynta, animation iyo abuuritaanka xogta 3D. Iyada oo loo marayo isdhexgalka fudud waxaad awoodi doontaa inaad ku kasbato aqoonta lagama maarmaanka u ah inaad wajahdo ...
Koorsooyinka - Naqshadeynta 3D Koorsooyinka - Geospatial Koorsooyinka - LandWorks Koorsooyinka isku dhafan
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira dad badan oo xiiseynaya daaweynta xaddi badan oo xog ah si ay u turjumaan ama u gaaraan go'aanno sax ah dhammaan dhinacyada: meelaha, bulshada ama farsamada. Marka xogtan maalin walba soo baxda la falanqeeyo, la fasiro lana wadaago, waxay isu beddelaan aqoon. Muuqaalka xogta ayaa ...
Koorsooyinka - Geospatial Koorsooyinka Barnaamijka